FM11RF08 Chip အင်းလေး PVC Card ကို, FM11RF08 Chip Etching Inlay Card, FM11RF08 Inlay PVC Card, FM11RF08 စွဲအင်းလေးစက္ကူကဒ်
 » RFID Card ကို » ချိတ်ဆက်မှု Chip ကဒ် » အင်းလေးကဒ် / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို
FM11RF08 Chip အင်းလေး PVC Card ကို, FM11RF08 စွဲအင်းလေးစက္ကူကဒ်
အင်းလေးကဒ် / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို FM1108 Chip Etching Inlay Card, FM1108 Chip Inlay PVC Card, FM1108 Etching Inlay Paper Card, FM1108 Inlay PVC Card, FM11RF08 Chip Etching Inlay Card, FM11RF08 Chip အင်းလေး PVC Card ကို, FM11RF08 စွဲအင်းလေးစက္ကူကဒ်, FM11RF08 Inlay PVC Card
ရရှိနိုင်အင်းလေးအရွယ်အစား: Φ23mm, 22.5× 38mm, 40× 40 မီလီမီတာ, 45× 45mm, 25× 75mm, 4172.6mm ×, 45× 76mm,စသည်တို့ကို.
န့်ကိုရိုက်ထည့်: NXP Mifare 1k S50, FM11RF08 (NXP Mifare 1k S50 နှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်ဖက်)
သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်: 1KB, 8Kbit, 16 partitions ကို, တစ်ဦးချင်းစီက partition နှစ်ခု password များ(1KB = 8Kbit)
operating ကြိမ်နှုန်း: 13.56MHz
ပရိုတိုကောနျ Standard: ISO14443TypeA
Reading အကွာအဝေး: 2.5~ 10cm
Reading အချိန်: 1-2ဒေါ်
တည်မြဲခြင်း: > 100,000 ကြိမ်
ဒေတာကို retention ကို: >10 နှစ်ပေါင်း
အလုပ်လုပ်အပူချိန် : -20℃ ~ + 55 ℃
antenna ပစ္စည်း: PET + စွဲလူမီနီယမ်
ကဒ်ပစ္စည်းများ: PVC, ပေ, PETG, စက္ကူ
Card ကိုရှုထောင့်: က ISO စံကဒ် 85,6 × 54 × 0.84mm သို့မဟုတ်ထုံးစံ
အင်္ဂါရပ်များ: fast reading and writing speed, high sensitivity; တန်ဖိုးနည်း, excellent performance and stability, good encryption, widely used in supply chain management, logistics and distribution, product certification, fixed asset inventory and tracking, baggage handling and tracking, item-level labeling And other fields.
ပုံမှန် applications များ
Corporate/campus One Card Solutions, bus stored value card, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသေဆုံးသူ, ယာဉ်ရပ်နားအများကြီး, အသိုင်းအဝိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, Club membership management, supermarket membership card, bath, gym VIP card, စသည်တို့ကို.
ပုံနှိပ်ခြင်း: ပုံနှိပ် offset, Silkscreen ပုံနှိပ်, အပူပုံနှိပ်ခြင်း, မှင်-ဂျက်ပုံနှိပ်ခြင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်း.
လုံခြုံရေး features တွေကို: ရေစာ, လေဆာ ablation, hologram / OVD, ခရမ်းလွန်မင်, optical Variable မှင်, hidden ဘားကုဒ်ကို / ဘားကုဒ်မျက်နှာဖုံး, grade သက်တံ့ရောင်, micro-စာသားကို.
အခြားသူများက: chip ဒေတာစတင်ခြင်း / စာဝှက်စနစ်, programed ကိုယ်ပိုင်သံလိုက်အစင်း, လက်မှတ panel က, ဘားကုဒ်, အမှတ်စဉ်နံပါတ်, ဖောင်းကြွ, DOD ကုဒ်, NBS ခုံးကုဒ်, Die-cut.
I am interested in your product FM11RF08 Chip Inlay PVC Card, FM11RF08 စွဲအင်းလေးစက္ကူကဒ်
prev: Mifare 1k S50 Chip အင်းလေး PVC Card ကို, Mifare 1k S50 စွဲအင်းလေးစက္ကူကဒ်
နောက်တစ်ခု: ISO ကို 18000-6B / 6C Long ကအဝေးသင် Card ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF G2 မှာ Long ကအဝေးသင် Card ကို
Mifare 1k S50 Chip အင်းလေး PVC Card ကို, Mifare 1k S50 စွဲအင်းလေးစက္ကူကဒ်
Tag ကို-က HF-ငါ Chip ကဒ်, Ti2048 Chip ကဒ်, Ti2K Chip ကဒ်
ဦးကုတ် HSL ထူးအိမ်သင် Card ကို, ဦးကုတ် HSL(SL3 ICS30) ကားရပ်နားကွင်းကို Long Range 915MHz Card ကို, ISO ကို 18000-6B အဖြူရောင်ကဒ်
NFC ကိုထုတ်ကုန်များ (16)
RFID အင်းလေး (13)
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (67)
anti-သတ္တု Tag ကို (23)
အခွားသော Anti-သတ္တု Tag ကို (14)
စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် (21)
EAS Store ကိုနှိုးစက် (7)
LF / HF Reader ကို (24)
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို (16)